सवारी साधन र उद्योग बन्द गरिने ! – Kathmandutoday.com
सवारी साधन र उद्योग बन्द गरिने !
काठमाण्डु टुडे २०७७ चैत २४ गते ७:१० मा प्रकाशित
काठमाण्डु, २४ चैत– केही दिन कम भएको नेपालको वायु प्रदूषण फेरि बढेको छ । राजधानी काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहर हुन पुगेको छ । घाम नलाग्ने, चिसो हुने, नाक पोल्ने गरी हावा बहने जस्ता असर देखाउँदै वायु प्रदूषण बढेको हो ।
वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता इन्दुविक्रम जोशीका अनुसार प्रदूषण गत साताकै अवस्थामा नपुगे पनि सोमबारदेखि बढेको हो । उनले भने, “अझ बढ्दै गएमा सवारी साधन र उद्योगधन्दा बन्द गरेर भए पनि कम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।” देशव्यापी रूपमा वन डढेलोको लहर बढेकाले नेपालको वायु प्रदूषण दोहोरिएको उनी बताउँछन् ।
जबसम्म वन डढेलो नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म वायु प्रदूषण कम हुने सम्भावना नरहेको उहाँले सुनाउनुभयो । वायुमण्डलमा प्रदूषण बढेको वायुको अवस्था स्थिर रहँदा त्यसमा अन्य प्रदूषणको मात्रा थपिँदै गएको छ । विभिन्न प्रकारको रसायन तथा ग्यासको मात्रासमेत बढ्दा वायुमण्डल धुमिल बन्ने जोशीले जानकारी दिनुभयो तर त्यस्ता प्रदूषित वायु बनाउने ग्यासको मापन गर्ने प्रणाली नेपालमा उपलब्ध छैन ।
बढ्दो दरमा रहेको प्रदूषणको विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपालको काठमाडौँ सहर पहिलो नम्बरमा छ । गोरखापत्रबाट
माओवादीले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन औपचारिक रुपमा लियो फिर्ता
उपनिर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
उपत्यकासहित १५ ठूला सरहरका विद्यालय एक महिना बन्द !
सरकारकाे ‘सप्राइज’ निर्णयले सभामुख आक्रोशित
माधव नेपाल र प्रचण्डबीच यस्तो सहमति
उपचारका लागि भर्ना गर्न कोभिड अस्पतालमा शय्या अभाव
कैलालीमा कोरोना संक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु
माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठनमा जिम्मेवारी हेरफेर, संगठनका उपमहासचिवलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी